Old Spice Inokurudzira: Kana Uri Mukukahadzika, Enda Bofu | Martech Zone
Old Spice Inofuridzira: Paunenge Usina chokwadi, Enda Bofu
Chitatu, July 14, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva ini ndinoda kushambadzira uye kuvandudza marefu-kwenguva marongero anochinja maonero ebhizinesi, anowedzera kugamuchirwa kwechiratidzo, kutyaira kutengesa uye kukwirisa kubudirira kwekambani. Nhasi hakuna mumwe wavo.
Nyika yepamhepo yekutengesa iri kupisa pa penya zano re Mudhara Spice mukomana.
Kana iwe uri mumwe wevashoma vasina kumbonzwa, murume weOld Spice anoshanda kubasa kupindura maTweets kuburikidza neYouTube chiteshi pachezvake. Ari kupindura vanhu vane mikuru yekutevera nzira yose kusvika kune avo vane zvishoma zvinotevera (asi kazhinji vateveri VAKURU).
Tiri here vasina kudzika uye mbeveve? Kanda mukomana akanaka anotaridzika ane izwi rakakura inflection mune tauro uye umupe zvimwe zvinodzosera shure uye nyika inoitarisa seyakajeka shasha. Ichi chepakutanga here? Haisi here iyi ingori iyo Endai baba baba boob mushandirapamwe kugadziriswazve? Ichokwadi here kuti zvinoshamisa?
Twilight? Bonde neGuta? Matatya muBeer Commercials? Endai Baba Mabhuti? Old Spice mukomana? Pamwe isu tese tinofanira kurega kuyedza kuve takangwara zvakanyanya uye kuibvisa pasi zvishoma.
PS: Ndini ndisina kudzika uye mbeveve. Ini ndinoda aya kushambadza uye ndiri kuve munyengeri wese. Nekudaro, ini ndichamira nenyaya yekuti ini handina kunhuwa Old Spice kubvira pandakaona Baba vangu vachiiwana seyakagadza zvinhu muma 70's. Handifungi kuti akamboishandisa. Inokumbira iwo mubvunzo, "Mushandirapamwe uyu uri kutengesa zvimwe Old Spice here?"
Tags: mabhizimisichekare zvinonhuwirayekare yezvinonhuwira mushandirapamweevanhu vezvenhau
Jul 15, 2010 pa 7: 52 AM
Ndinoda mushandirapamwe uyu! Wanga uchitevera kumashure-uye-mberi pakati peOld Spice Guy naAlyssa Milano? Alyssa akatotora vhidhiyo yake mhinduro achikumbira Old Spice Guy kuti atumire madhora zana kuhomwe yekuyamura kupera kwemafuta mushure mekunge amutumira maruva gumi nemaviri.
Mhinduro yake iri pakuti http://www.alyssa.com/
Jul 15, 2010 pa 8: 14 AM
Ini ndinobvuma zvachose kuzvida, zvakare, Patric. Ndiyo pfungwa yangu, zvakadaro. Tinofanira kusiya zvese zvedu zvekunangisa uye kudonha mishandirapamwe tongonyora mimwe mitsara inosetsa towana mumwe munhu kuti aratidze ganda kuti tiite kushambadzira kwedu?
Jul 15, 2010 pa 8: 20 AM
Zvakanaka ini ndiri mukomana saka zviri pachena kuti ganda rinoita chinhu kwandiri. Pane kudaro, inhaurirano yehungwaru yavanomupa uye matauriro aanozviita ndiwo anoita kuti zvindisekese. Iye zvino madzimai kune rumwe rutivi vanogona kunge vane maonero akasiyana.
Saka handifungi kuti izvi ndezveganda. Ndezvekungwara. Ndinofunga kuti vhidhiyo yeToyota "Swagger Wagon" ndeimwe yemavhidhiyo ekugadzira uye anonyanya kufadza (kutengesa?) Ndakamboona. Uye hongu, zvinoita kuti ndide kutenga Toyota Sienna.
Kana iri GoDaddy, hongu kukwezva kweganda kunoshanda. Asi kutaura chokwadi, ndakatenga kubva kuGoDaddy izvo zvishambadzo zvisati zvabuda uye handina kuzotenga zvakare nekuda kwema ads. Kana mangwana HostGator yakatanga kuratidza "ganda" ads ndaizochinja zvese kwavari nekuda kwekushambadza. Kana neniwo ndaisazotenga domain yangu inotevera kubudikidza navo.
Jul 15, 2010 pa 8: 21 AM
Crud, mutsara wekupedzisira paHostGator unofanirwa kunge uri "ini * handingachinji * zvese kwavari ..."
Jul 15, 2010 pa 8: 32 AM
“Ndiyo pfungwa yangu, zvakadaro. Tinofanira kusiya zvese zvatiri kunanga uye kudonhedza mishandirapamwe tongonyora mitsara inosetsa toita kuti mumwe munhu aratidze ganda kuti tishambadzire? - Doug, hapana mhosva asi uri kure kure neizvi. Old Spice iri kumisikidza mhando yavo kune vateereri vadiki nekumwe kushambadzira kwakanyanya. Ivo vari kushandisa akawanda masvikiro, anodhinda, terevhizheni, online (YouTube), uye social media kuti vasvike kune vavanoda. Sei, semushambadzi, ungati uku hakusi kutanga kwakanaka kwemushandirapamwe wakanaka kwazvo? Nekuda kwekuti ivo havana mushandirapamwe wekudonha hazvireve kuti kushambadzira kwakashata.
Jul 15, 2010 pa 10: 10 AM
Ini ndinofunga kuti 'izvi zvichatengesa zvimwe Old Spice' mubvunzo vanhu vazhinji vanotya kupindura izvozvi 🙂
Ndinofunga zvichadaro. Izvi zvese zvakanaka kune brand. Ndinofunga vazhinji vachatarisa patsva kuOld Spice nekuda kwekuti tanga tichifunga nezvazvo kwemazuva maviri apfuura ...
Nekudaro, iyo brand iri kuita chero chinhu here kuti ndibatane nemoyo nayo? Kuvaka kuvimbika here? Kunze kwekubatanidzwa, kwete chaizvo. Ini ndinofunga mushandirapamwe uyu ungori chidimbu chimwe chete chezvichiri kuuya kubva kune zvatakadaidza kuti kushambadza.
Jul 15, 2010 pa 10: 12 AM
Douglass, mushandirapamwe uyu unosetsa. Inoita kuti vanhu vataure nezve brand. Iyo ine brand inofungidzirwa sechimwe chinhu chakashandiswa nababa vako kana sekuru, inhanho yekutanga yekuita kuti vanhu vaedze zvakare. Old Spice yachinja zvakanyanya kubva mushure mekuveura chete. Ini ndinofunga Old Spice iri kuenda zvakanyanya kusetsa uye kutaura kunomutsa ala Iye Anonyanya Kunakidza Guy Munyika, pane chimwe chinhu seAxe.
Ini handibvumirane newe pakuenzanisa neGoDaddy. Zviripachena, GoDaddy iri kunanga Varume neaya mashambadziro. Kana Old Spice yaizoshandisa Bonde Appeal kutengesa, vaizoita kuti GoDaddy vasikana vanowira pamusoro pake, zvakafanana neAxe.
Ini ndinobvumirana neakawanda mapoinzi ari kuitwa naPatric, uye iyo "Swagga Wagon" inotengeswa huru, uye Trunk Monkey kushambadzira kunotyisa zvakare. Ndinofunga kuti Funny inotora nguva yakareba uye haikanganwiki.
Jul 15, 2010 pa 10: 13 AM
Ndinofanira kutanga ndataura kuti ndinodawo mushandirapamwe uyu. Zvinovaraidza uye vanhu vanoda kubatanidzwa. Chii chimwe chavangadai vakakumbira.
Zvino, nezvemubvunzo wako wekuti inonyatso kutengesa Old Spice, zvinogoneka. Ndinofunga kuti vanhu vazhinji vane pfungwa dzakafanana pamusoro pako dzekuti “ndidzo dzaishandiswa nababa vangu kuma70” asi ndinofunga kuti mushandirapamwe uyu uri kuedza kushandura mufananidzo iwoyo. Iri kuedza kuita kuti vechidiki vazvitore semhando inonakidza pane imwe yababa vangu.
Ndakanyatsoona mumwe munhu murukova rwangu rwepa twitter mangwanani ano achiti mushure mekuona iyo camign yavo yakavhurika kune brand kupfuura kare. Zvinoreva here kuti vachatenga? Pamwe. Izvo zvinouya pasi pamabatiro avanoda kunhuhwirira kwayo, asi ini ndinofunga ine vanhu vakawanda zvakanyanya vachitarisa kune yekare spice muchitoro chezvinodhaka kupfuura kare.
Sheldon, maneja wenharaunda yeSysomos
Ikozvino ndava pabhiza!
Jul 15, 2010 pa 10: 32 AM
Kana usati waverenga kuti izvi kushambadzira zvinogadzirwa sei kuburikidza nesocial media uye zvinogadzirwa munguva chaiyo, inonakidza kuverenga: http://www.readwriteweb.com/archives/how_old_spice_won_the_internet.php?
Mavhidhiyo emhando yeTV anogadzirwa paavhareji muavhareji yemaminetsi manomwe imwe neimwe.
Jul 15, 2010 pa 10: 39 AM
Ehe, ndakapusa zvekufunga kuti Old Spice inotonhorera uye inoshanda. Tichifunga kuti vanhu vazhinji vachiri njiva-gomba Old Spice semhando yeChembere - zvinobvunza mubvunzo - Pane iwo emhando yepamusoro, kushambadzira, uye kudhinda ads akashanda here? Ini ndinovimbisa kuti ivo vaidhura zvakanyanya kupfuura iyo Old Spice YouTube kuedza.
Jul 15, 2010 pa 10: 47 AM
Ndinewe, ndaifunga kuti kunonakidza, kuita uye kuita zvakanaka, asi ndinoda chaizvo kuona mabatiro ekutengesa tisati tazvizivisa budiriro yesocial media…
(Ndakazvibhuroga nezvazvo pano: http://bit.ly/9SiQ3L)
Jul 15, 2010 pa 10: 51 AM
Musikana wangu akauya kumba nezuro manheru ndokunditi akanhonga Old Spice akainhuwirira kekutanga nezuro nekuda kwemavideo iwayo. Zvakaitika kuti aizvifarira, uye anoda kuti ndiedze.
Iyo saizi yemuenzaniso weimwe, zvinobvumwa, asi mukati meiyo sampuli iri kushanda. 🙂
Jul 15, 2010 pa 10: 57 AM
Ivo zvechokwadi vakawana izvo mabhureki mazhinji angada kuve nawo mazuva ano (mushandirapamwe unofambiswa nekuparadzirwa nemutengi), uye Old Spice yakazove 'inotonhorera' zvakare. (Um…zvakambotonhorera here? Ndinofunga ndingangove mudiki zvakare kuziva zvakawanda nezve Old Spice..)
Kwandiri, rudzi urwu rwekushambadza hazviiti kuti iwe 'uvimbe' nemhando, sezvakaita GoDaddy (webhusaiti yekutambira chiri chimwe chinhu chinoda nhanho yekuvimbwa - hwema hwemurume; kwete zvakanyanya) asi dai ndakaona Yekare. Spice pasherufu yechitoro chemishonga, ndingangozvipa mhuno manje, kuti ndingoona zvaari kunhuwirira chaizvo
mbeveve yakanaka. Chimumumu chinosvikika; mainstream. Chimumumu ndiko kutiza. Asi unokona kudaidza kuti mbeveve. Hungwaru, uye ibonde. Musanganiswa usingagone kuramba. 😉
Zvakanaka kunzwa maonero anopikisa pane kudaro, asi mushandirapamwe uyu WAKASIYANA zvakanyanya pane GoDaddy Super Bowl ads. Kwete kuenzanisa kwakanaka IMO. Kwete maapuro kumaapuro, maapuro kuti ribeye.
Kungofanana chete nemushandirapamwe weGoDaddy ndeye "kuratidza ganda" chikamu.
Ini ndinobvuma kuti ganda nekuda kweganda harinane uye mbeveve kana zvirizvo zvese zvazvaive asi mune ino kesi rinoshandiswa nenzira inopindirana kumushandirapamwe unobatanidzwa.
Uchapupu? Ini handifunge kuti vasikana vazhinji vakagovanisa yemahara GoDaddy ads ads neshamwari dzavo uye network. Neimwe nzira, PENTY yevakomana vakagovaniswa uye vanoenderera mberi nekugovera iyo Old Spice ads, kunyangwe uine murume asina hembe seyekutanga kuona chinhu. Kuda kwavo kuita izvi kunoratidza kuti “ganda” handicho chikonzero chavari kugovana.
GoDaddy's ads yaive yechinyakare imwe nzira yekushambadzira, handizvo? Pakange pasina munhu uye pakanga pasina nzira yekuti ndi "itane" naDanica Patrick zvakananga. Zvimwe chete nemimwe mienzaniso yenyu. Kunyangwe kana murume weOld Spice akasapindura kune mumwe munhu anomubvunza mubvunzo, tariro iyoyo yekuti achapindura uye chokwadi chekuti anopindura kune zvakawanda zvinoisiyanisa kubva kuGoDaddy, Twilight, Bonde neGuta uye matatya mukushambadzira kwedoro. .
Iko kubatanidzwa uye kusarudzika kunoita kuti izvi zvisiyane. Mushambadzi akachenjera akambondiudza kuti kushambadzira kwese email kunofanirwa kunge kuri 1) kunotarisirwa 2) kwemunhu uye 3) yakakosha. Mazhinji makambani haatombogone kuita neemail uye Old Spice yakakwanisa kuzviita nemushandirapamwe wekushambadzira.
Jul 15, 2010 pa 10: 58 AM
Vhiki rapfuura risati rasvika, handifungi kuti ndakambotaura mashoko okuti ‘Old Spice’ kunze kwekunge ndichiita zvejee ndichireva munhuwi wemudhara. Nekudaro, iniwo ndakanwa iyo 'Old Spice' social media campaign Kool-Aid. Ndinochida. Zviri kuita. Zvinoita kuti ndide kumhanyira kuTwitter uye ndiuye nechimwe chinhu chine hunyengeri mune tariro yekuti Old Spice Guy ichaita vhidhiyo kwandiri chete. Zvine chekuita here nekukwezva kwake bonde? Kwete. Ipfungwa yemukurumbira wechinguvana (hongu, ndiri kudzika kudaro), kushamwaridzana kunotonhorera nemhando (ndingave ndichitenga kana kwete) uye chimwe chinhu chinonakidza kugovana neshamwari. Kufara kwese uku kwave kutengesa kwandiri here? Kwete. Asi ndichakuudza kuti nguva inotevera pandinenge ndiri pasherufu, ndichapfunya chisero chemumwe wevakomana vavo vakaipa ndomboridza tsamwa. Pane chipingamupinyi chakakosha pakati pemushandirapamwe mukuru uye ini ndichiburitsa mari muchitoro chemishonga. Ndicho chigadzirwa. Kana isinganhuhwi zvakanaka, shandai zvakanaka uye mupe kukosha kwemari ini handisi kuita transaction. Zvakanaka pane Old Spice nekundimanikidza kuti ndiise brand yavo mune yangu yekufunga seti.
Jul 15, 2010 pa 11: 00 AM
- Kuziva: Tarisa
– Kukurukurirana: Tarisa
Uku ndiko kusvika kwakawanda kushambadza kunokwanisa kuenda, zvisinei kwandiri izvi zvaenda kure:
-Kufunga (zvione pamasherufu uye ZIVA, funga nezvazvo): Tarisa
-Kutenga Kumwechete: Tarisa
Ndiri kuona gf yangu (dai aive kuCanada) achimira, achinhuwa uye achida kuzviedza pandiri nekuda kweizvi. Inogona kungotyaira kutenga kamwe chete pa1/20 yevaoni, asi panguva iyoyo ibasa rechigadzirwa kutyaira kudzokorora kutenga.
Iko kukunda mumabhuku angu, izvo chaizvo zvakaoma kutaura nekuti hazvina kudzika. Kuitwa zvine hungwaru, zvinosetsa, zvinosetsa, zvakasanganiswa muma social media asi zvichiri kudzika. Uye ndinochida.
Jul 15, 2010 pa 11: 11 AM
Pfungwa yemashambadziro aya ndeye:
1. Wedzera kuziva. Zvaita.
2. Tanga kukurukura. Zvaita.
3. Ita kuti vanhu vaone Old Spice pamasherufu. Ndapedza (verenga zvakataurwa pamusoro pangu).
4. Ita kuti vanhu vatenge chigadzirwa. Zvakare, zvaitwa. Sure nhamba dzichiri kuuya asi ndakatoona kuti shamwari dzangu dziri kuedza nyangwe zvazvo baba vavo vaimboishandisa kare.
ASI handingasvike pakuzvidaidza kuti inhau yebudiriro yesocial media izvozvi. Inobudirira here pakusimudzira ruzivo rwemhando? Hellz hongu. Muchokwadi, ndine tally yekuti ndiani aizohwina gakava pakati peOld Spice guy naDos Equis guy (ndichifunga kuti Chuck Norris akange asipo nekuti tese tinoziva kuti aizokunda) ASI kusvika ndaona nhamba pakutengesa chigadzirwa kusvika zvino chave kungoshandiswa semushandirapamwe wekuzivisa.:) Mubvunzo ndewekuti unogona kudiwa asi uchifambisa chigadzirwa?
Unogona kuda mukomana weDos Equis, asi unoda doro reDos Equis here? Wakatenga kamwe chete mushure mekutanga kushambadzira kwekutanga? Wakaramba uchitenga here pashure? Kana paine kukanganisika pakati pechigadzirwa nechigadzirwa iwe unongotora chete-yekutenga kutenga izvo zvisiri izvo zvekupedzisira chinangwa. Iwe unoda kugadzira kuvimbika kwemhando - zvisinei kuti inobata sei sirogani (s).
Unofunga kuti ndiri off-base?
Ndishevedze asi unyeverwe: Ini ndiri mudiwa kwete murwi asi ndiri murwi saka usawane chero mazano.
Zvino tarira mukadzi wako, zvino chinditarira. Ndiri pabhiza.
Jul 15, 2010 pa 11: 14 AM
Manheru ndichifamba mumikoto yegirosari ndakasangana neOld Spice. Ko ndainge ndisina kurongedzerwa zvinhu zvekugezesa ndaitenga kuti ndiedze. Mushandirapamwe uyu urikusundidzira kumusoro kwepfungwa uye anecdotal humbowo hunoratidza kuti iri kutengesa kana maviri.
Chandinoda nezvemushandirapamwe ndechekuti inonzwisisa chimiro che quirky chetsika yeinternet. Chikwata chakanga chisiri kungouraya chete, vaiteerera uye vaipindura. Kutamba nerudo naAlyssa Milano, kusvika pakutumira marozi kumba kwake. Kuendeswa kwechikumbiro chewanano. Mhinduro yakananga kune mumwe munhu asina yakakura inotevera ainyomba kuti Old Spice Man anongotaura nevanhu vane mukurumbira. Kuendeswa kwezvinonzwika kuitira kuti nharaunda yereddit igadzire http://oldspicevoicemail.com
Unyanzvi hwepamusoro uhwu here? Aiwa. Asi, kutengesa sipo kwakambokwirisa here?
Ini zvechokwadi ndinofarira kudzidza kuti ndeapi mhedzisiro ichaonekwa neP&G kubva kumushandirapamwe uye ndinoda kudzidza kuti iyi ichangoburwa yemushandirapamwe inofananidzwa sei neyekutanga super-bhowl ad, zvese maererano nekuonekwa uye maererano nekutengesa.
…nyemwerero yemonocle P_^
Jul 15, 2010 pa 11: 18 AM
Iwe unoziva sei iwe unoziva kuti iyi ihondo huru yekukunda?
Nekuda kwekuita kwayakaitwa. Iwe wakanyatso kurongeka mukuongorora kwako asi pakupera kwezuva kushambadzira kwakafanana nehunyanzvi. Kana vanhu vachifunga kuti zvakanaka, saka kunaka kwayo zvisinei nekusadzika, kupusa, kupusa, kupenga, kuneta, kuremara, chero. Zvinosetsa zvinosekesa, zvakanaka zvakanaka uye mhedzisiro ndizvo zvine basa.
Vazhinji vanhu pazasi vakatopupura vanhu vari kutofunga, kuyedza nekutenga chigadzirwa chisina munhu ari pasi pemakore makumi matanhatu akatenga kwemakore makumi maviri.
Vakomana ava vakakurudzira vamwe vevane ruzivo uye vanoshora vezvenhau vezvenhau kuti vasvetuke mubhodhi uye vasimudzire mushandirapamwe wavo uye vape chokwadi chemumugwagwa. Chimwe chinhu chine mhando shoma dzinomboita.
Ndiko kumhanya kumba!
Jul 15, 2010 pa 11: 22 AM
Ndinoziva kuti pari zvino ndinoshandisa zvigadzirwa zvekare zvezvinonhuwira uye kuti ndakatanga kuzvitenga panguva yakakurumbira yekushambadzira 'Ndiri pabhiza'. Ndizvo chaizvo kutenda kune ad? handina chokwadi.
Kunyangwe tichigona kuyera bhizinesi idzva nemushandirapamwe uyu kana kwete kwandiri, haisiriyo mhedzisiro yakakosha. Ini ndinofunga kuti, sekureva kwaJeremy Wright mukutaura kwake, kuti nhaurirano dzinofanirwa kutorwa seyakakodzera metric nekuti nhaurirano dzakanaka dzinotsanangura chiitiko cheiyo brand uye kuti yakamira sei neveruzhinji. Social Media inzira inotonhorera yekurega brand ichifurirwa nevatengi, iyo inobvumira kuti iwedzere kuenderana nemutengi. Ini ndinonzwa kuti Old Spice yakagumburwa nemafungiro akafanana apo ivo mutengi anonzwa 'chikamu chechikwata' sekutaura.
Jul 15, 2010 pa 11: 29 AM
Kubvumirana neClay pazasi… GoDaddy inokundikana nekuti haina CHINHU chinovaraidza chiri kure, pasina mabhobho, uye unoziva chii ... kuratidza mabhobho muna 2010 kunoshanda seHollywood 'Blockbuster' ine 'special effects' yakanaka asi hapana nyaya ... Jurassic Park yakatyora iyo mold (uye aive nenyaya inogombedzera kuti atakure zuva) ... asi unorangarira here, haiwa handizive kugadziridzwa kwa'Godzilla' ... nokuda kwenyadzi Mateo.
GoDaddy kushambadzira = chigadziriso chinotyisa chaGodzilla ... Old Spice = bhaisikopo idzva Rakatangwa (kungobheja kuti rakasimba, handisati ndariona) … asi musanganiswa wezvinoyevedza uye ngano inoshamisa kutora vateereri aka varaidzo.
Muchiitiko ichi, kushambadzira kweOld Spice kwainakidza uye nzira uye nzira yavaibatana nayo nevanhu yaive 'yakanakisa' ... yaingove yakanaka, nguva.
Jul 15, 2010 na12:17 PM
Ndine urombo Chris! Handifunge kuti @GuyKawasaki na @AlyssaMilano havasi vateereri 'vadiki'. Zvakare, social media haisi 'vadiki' vateereri. Maitiro ari kuratidza kuti pakati pe-30s uye vakuru vane kukurumidza kugamuchirwa mwero musocial media. Uku kwaive kutamba kwehutachiwana kwakachena… nongedzera vanhu online vane vateereri vakakura, vatore pfungwa dzavo (neEGO yavo) uye ita chimwe chinhu chinoita kuti vataure nezve Old Spice.
Handina kuti kushambadzira kwakashata, ndiri kungoda kuziva kana kuri kushambadzira kunotoshanda.
Jul 15, 2010 na12:31 PM
Ummm… Ndakapfeka zvinonhuwira zvekare. Handina kuziva kuti ndakanga ndisina tsika.
Jul 15, 2010 na12:33 PM
Ongororo yako yeOld Spice stunt = FALSE.
Iwo Old Spice mavhidhiyo aive akajeka kwete bc chero chinhu pachiratidziri, asi bc zvaari kutaura zvinoshamisa. Ndine chokwadi chekuti zvinhu zviviri: (a) ari kutaura nesu uye (b) zvaari kutaura zvine hungwaru. Huwandu hweruzivo rwakapararira rwavakaunza mumhinduro dzavo diki zvese zviri zviviri zvipfupi uye zvine mutsindo. Vainyatsoziva zvekutaura, uye nguva & kuenderana nenguva kwemhinduro idzodzo ndizvo zvatiri kunakidzwa nazvo. Isu takajairwa kuita hunhu hwakafumuka, kusazivikanwa tichisevha pawebhu, zvekuti chero kuedza kutaura kudzoka kuna Joe Everyman (kureva kutyora monotony) kunogamuchirwa nemaoko maviri. Sei mhomho dzeflash dzakakurumbira izvozvi? Nechikonzero chimwe chete (asi chine chekuita neruzivo rwedu rusina ruzivo mukati mepolis). Zvinenge zvisingatarisirwe painternet sezvo ingangoita yechipiri hunhu kurasika mukupokana. Old Spice yakaita kuti mukana wekutaurwa naye uve pachena, uye kana tikatora chikamu, taida kuverengerwa naJoe Everyman Saka hongu.
Jul 15, 2010 na12:53 PM
Uri kutasva bhiza here?
Jul 15, 2010 na12:59 PM
Ndinoshandisa Old Spice shower products. Hapana deodorant kana chimwe chinhu. Zvigadzirwa zvavo zvekugezesa zvakanaka chaizvo. Ndakaona zvichinakidza pakatanga kushambadzira uku.
Jul 15, 2010 na1:01 PM
Ivo vadiki kuna baba vangu, saka hongu vateereri vadiki! 🙂 Vaive neTV nzvimbo dzinotenderera pamberi pesocial media ... ichiri kushambadzira-channel kushambadzira inoita kunge chikamu chemushandirapamwe mukuru. Humbowo hunogara huri mu#'s saka tichafanirwa kumirira kuti tione kana zvashanda. Parizvino zvingaite senge zviri kushanda… zvakuita kuti unyore nezvazvo… uye nekuziva kuti uri mushambadzi akangwara iwe, ndinobheja waiziva kuti iyi positi yaizounza hurukuro yakawanda uye yekubatanidza muto zvakare 🙂
Jul 15, 2010 na1:05 PM
Nick, neniwo. Asi ini handisati ndave kutaridzika semurume mune izvi zvekushambadzira!
Jul 15, 2010 na1:21 PM
Kutyaira mari ndiko kuri kutsanangura here kana kuti kwete iyi mushandirapamwe kubudirira pasocial media? Ndinogona kukumbira kusiyana nokuti zvingaita kwandiri kuti 26 zvinyorwa pamusoro pechinyorwa chako chete, zvisingaverengeki (mamiriyoni zvichida) tweets uye kumwe kushamwaridzana kwenhau dzezvemagariro evanhu zvose zvinonongedza kune nyaya yekubudirira kwekutengeserana kwehupfumi.
Kunyangwe pasina kuwedzera kwekutengesa kwakananga kwakaoma kutaura kuti kuwedzera kweruzivo rwemhando uye sumo kumusika mutsva hauna kukosha uye inopa chikuva chekuedza kunotevera.
Jul 15, 2010 na1:24 PM
'Kumwe kutenga' kana kunyange spike mukutenga kungangove kusina Return on Investment inodiwa kuratidza kubudirira pamushandirapamwe wakadai.
Jul 15, 2010 na1:25 PM
Ini ndinobheja kutengesa kwayo kwakawanda Old Spice - nekuti kugadzira kwayo kuziva saka nguva inotevera kana iwe uri muchitoro iwe unozoona iyo Old Spice yanhasi haina kufanana Old Spice yaipfekwa nemadzibaba ako kuma1970. Ivo vari kuwedzera mutsara wavo zvakanyanya uye zvimwe zvezvinhu zvitsva zvakanakisa.
Jul 15, 2010 na1:39 PM
Asi kunyangwe chiratidzo kana kuziva 'chinangwa chekupedzisira kutengesa.
Jul 15, 2010 na1:42 PM
Isu vakuru tave nenguva taona mishandirapamwe yakawanda yakadai ichiuya ichienda. Takaona munhu wese achipopota kubva padenga remba pamakampani akajeka, kungoona mitengo yemasheya uye kutengesa kuchiramba kuchidonha gare gare. Ndosaka ndichishoropodza mushandirapamwe uyu. Ini pachangu ndinorida uye ndinoshamiswa neruzha rwakawanda rwandinonzwa… asi ndinongoshamisika kana iyo yenguva refu ichange iripo.
Jul 15, 2010 na1:43 PM
Tabvumirana pane zvese… kunze kwemubvunzo kana chengetedzo yekuti mushandirapamwe uyu wakabudirira here kana kuti kwete.
Iyo slam dunk, kune chero kambani, kuve nekushambadzira kunoshamisa UYE zvigadzirwa zvinoshamisa. Ini handina kupokana mushandirapamwe uyu uchakurudzira vanhu kuti vatenge… asi kana zvigadzirwa “zvinonhuwa” (pun yaida 😛 ), saka haugone kupa mhosva kushambadzira.
Nemamwe manzwi, ndinotenda chinangwa chemushandirapamwe - cheOld Spice kana Dos Equis - ndechekuti 'Edza chigadzirwa changu' ... kwete 'Iva mumiriri wehupenyu hwese wechigadzirwa changu'. Nezve izvo, iyi Old Spice mushandirapamwe wakabudirira WWILDLY!
Jul 15, 2010 na2:28 PM
Ichokwadi asi ndicho chaiva chinangwa chekuedza uku here? Zviripachena vari kuyedza chimwe chinhu chitsva, vachiedza kumutsiridza iyo Old Spice brand uye kuita kuti iwedzere kufadza kune chizvarwa chidiki. Pakupedzisira izvi zvinozotungamira mukutengesa asi icho chaive chinangwa chekuedza uku here kana kuti chaive chinangwa chakanyanya pamusoro pekuziva uye kugadzirazve chigadzirwa chaionekwa sechigadzirwa chekare? Iye zvino vane chikuva chikuru kubva kwavanoenda kumberi uye kusimudzira chigadzirwa nekutyaira mari mupfungwa. Ikoko hakusi kubudirira here? Izvo hazvina kufambiswa nesocial media?
Jul 16, 2010 pa 5: 09 AM
Kunyarara here? Ehe. Zvikasadaro hazvizoenda nehutachiona. Heino mamiriro chaiwo enyika. Nekuti Old Spice yakatanga mushandirapamwe wavo wehutachiona kukurudzira nhaurirano dzisiri dzekushambadzira senge iyi, vakomana vakati wandei vandinoziva vari muno vachizeya nezvekukura kwakaita zvigadzirwa zvavo. Iye zvino ndinonzwa ndichimanikidzwa kutarisa chikamu cheOld Spice chesherufu nguva inotevera pandinoenda kuchitoro. Vachangobva kuhwina mutengi mutsva.
Jul 16, 2010 pa 5: 11 AM
Ini ndinobvumirana naAdhama, nyaya dzebudiriro chaidzo dziri mumakambani ekudzokorodza makambani akaita seDominoes neOld Spice vanokwanisa kufambisa nepakati pazvo zvinoburitsa ruzha runodiwa kuti vanhu vabatane uye vaongorore- vobva vachinja maonero avo vachifarira chigadzirwa. Hongu, zvakawanda zvezviitwa zvesocial media mapuratifomu nebhizinesi hombe zvakaoma kuyera nekuchinja kwemari yakananga, asi kukosha kunounza nhaurirano inobata chokwadi kwakakura.
Jul 16, 2010 pa 11: 58 AM
Kana iri mbeveve uye iri nyore kudaro, sei usiri kuzviita? Iwo mavara anopenya nekuti vanhu vari kutaura nezve Old Spice. Period. Kushevedzera.
Pfungwa yako ndeyechokwadi asi haina basa. Iri kushambadzira & inopenya mukusaziva kwayo. BTW, ndinofunga kuti repartee muOld Spice ads ane hungwaru zvishoma pane GoDaddy.
Jul 16, 2010 na1:54 PM
Chii chinonzi link juice inonaka? 😛
Jul 17, 2010 na2:51 PM
Varume, muri kurasikirwa nechikamu chakakosha chemusika… Mushandirapamwe uyu hauna kunangana nevarume…Unonangana nevakadzi. Tinotengera varume vedu, uye zvikomba. Uye isu tinoda mushandirapamwe.. :*
Jul 26, 2010 pa 9: 49 AM
Zvakanaka ... kutengesa kwadzikira: http://mkt.gs/dz3AJD
Jul 26, 2010 pa 11: 34 AM
Ehe, mushandirapamwe uyu uri kutengesa zvimwe Old Spice zvigadzirwa.
Maererano neNeilson Co. Kutengeswa kwakakwira ne11% pamavhiki e52, uye mumwedzi mitatu yapfuura, kutengesa kwakakwira 55 muzana uye mumwedzi wapfuura, vakakwira 107 muzana. http://bit.ly/brandweek-old-spice (Brandweek Chikunguru 25, 2010)
Kutengeswa kweRed Zone kwakarova $ 1.6 mamiriyoni kwemavhiki mana akapera July 11, 49 muzana inosvetuka pamusoro pemavhiki mana yakapera Feb. 21, SymphonyIRI's data inoratidza. Zvimwe zvina Old Spice Body Wash zvigadzirwa zvinoratidzawo kusimudza. Kutengeswa kwese kweOld Spice Body Wash kwakakwira 105 muzana yenguva iyoyo
Kana nhamba idzi dzakarurama, zvinoita sekubudirira kunoshamisa kwandiri.
Tumira 2010 "Old Spice = Murume ari paBhiza munhu wese ari kutaura nezvake uye kugovera kuburikidza neSocial Networks"